Husky Sanganisa Imbwa: Iyo AMZ yeHusky Cross Inobereka neMifananidzo - Inobereka
Husky Sanganisa Imbwa: Iyo AMZ yeHusky Cross Inobereka neMifananidzo
Iko kune cuter yakavhenganiswa rudzi rwembwa kupfuura Husky Mix? Hatina chokwadi.
Nekuwedzera kwakatsiga mukuzivikanwa kwembwa dzaHusky, hazvishamise kuti mazana embwa dzakabereka nerudzi urwu rwakavimbika uye rune simba.
Kubva ku purebred Pitbull Terriers uye Welsh Corgis, kuenda kuGerman vafudzi uye maGolden Retrievers ivo vese vakafambidzana naHusky kuburitsa imbwa dzakanaka.
Vanozivikanwa nekutsungirira kwavo, maitiro ekushanda uye huwandu hwehuchenjeri, maHukki imbwa hombe yekuyambuka nayo.
Saka pano isu takanyora rondedzero yemasanganiswa edu mashanu atinoda anosanganisira feisty Corgi x Husky Mix uye inodzivirira yechiGerman Mufudzi x Husky Mix.
Mukati uye Kurumidza Kufambisa
4. Husky + Pitbull Terrier = Pitsky (Akasimba Husky Musanganiswa)
3. Husky + Pug = Imbwa Yekumbundira (Musanganiswa Mudiki Husky)
2. Mufudzi wechiGerman + Husky = Gerberian Shepsky
1. Husky + Goridhe Retriever = Goberian (Yedu Inodiwa Husky Musanganiswa)
Ida iyo inematama, inofara-kuenda-rombo rakanaka hunhu hwehusky asi haufunge kuti une nzvimbo yemuviri wavo? Iyo feisty Corgi-Husky Sanganisa inogona kuve yako.
Yakakamisirwa yakatemwa imbwa dzinza dzese, rudzi urwu rwakavhenganiswa mugumisiro wekusanganisa Husky pamwe neCardigan kana Pembroke Corgi. Kazhinji kuvhiringidza iwo chete musiyano uripo pakati peCardigan nePembroke Corgi muswe:
Iyo Cardigan Corgi ine muswe
Iyo Pembroke Corgi haina muswe - kunyangwe kana Pembroke ikazvarwa ine muswe, inomiswa mukati memazuva mashoma ekuzvarwa
Iwe uchaziva nezve iyo Pembroke Corgi kubva chimiro chayo cheumambo . Mambokadzi Elizabeth II ave aine zvakawanda muhupenyu hwake.
Iyo Corgi inodikanwa nekuda kwehunhu hwayo hwakasimba; vane hushamwari uye vanotamba. Kuva kufudza imbwa ivo zvakare vane simba rakasimba iro rinogona kukonzeresa kuhukura kwakanyanya uye kusindimara - naivowo havatori nemutsa kusiiwa vega!
Ungwaru uye kugarisana zvinopihwa neimwe hafu yemusanganiswa uyu, Husky. Asi Huskies zvakare anogona kunge akaomesa musoro. Saka iyi Corgi x Husky Sanganisa yakasvinura, inodzivirira uye yakasimba inoda.
Varume ava vanoenderana nedzimba dzinoshingaira nedzimba dzakachengetedzwa, usakanganwa tsika yaHusky yekutiza. Ivo vanonyanya kukodzera kune vakuru dzimba chete sezvo chikamu cheCorgi chavo dzimwe nguva chinonzwa kuda kwekufudza vana vadiki.
Varidzi vane nzwisiso yezvavanoda chaizvo zvekuve padyo, uye vane nguva yekupa yakakwana kurovedza muviri uye kukurudzira, ndivo vakanyanya imbwa-vabereki zverudzi urwu.
Zvisinei nehukuru hwavo hushoma vanogona kupaza musuwo kana vakasara vega kwenguva refu. Ivo zvakare vanohukura izvo zvinogona kuve zvinonetsa kune vamwe varidzi.
Kuva bhora rinoyevedza re fluff , ivo vanowanzo tsanangurwa se squatter husky asingambokure.
Mazhinji maCorgi anosanganiswa anogara nhaka yekaviri jasi iyo inoda kugara yakashongedzwa. Iwe zvakare unozofanirwa kuisa mari mune yakanaka vacuum; unenge uchishandisa zvakanyanya!
Kuwedzera kwakakwana kudzimba dzevakuru chete, pooch iyi yakangwara uye yakangwarira; iye zvirokwazvo ihunhu hukuru mumuviri mudiki!
Iyo Pitsky ndeye inokatyamadza Husky Sanganisa pakati peayo an Alaskan kana Siberian Husky uye Pitbull Terrier . Kutenda kuvabereki vese kuve nehushamwari kana iwe uri mushure mekuona imbwa, iwe uri munzvimbo isiriyo.
Yakamira isina kureba kupfuura 21 ″ uye ichirema pakati pe30 uye 70lbs, iyo Pitsky ingori imbwa hombe. Asi, usarega rudo rwavo uye kuvimbika kuchikunyengedza.
Ipo ivo vachifara kukumbundira pasofa, iyo Pitsky iri kushingaira uye inoda mafambiro ake. Anoda kutamba uye anofarira kukwikwidza muchivanze nevana.
Anosuruvara Pitsky uchatsenga kana kuungudza uye kana vakachengeta majeni avo ekupukunyuka kubva kumubereki waHusky, ivo vanozoedza kutsvaga chimwe chinhu chinovafadza.
Muzhinji, uyu musanganiswa wakachengetedza huchenjeri uye kuvimbika kubva kumubereki wavo wePitbull, asi, pane zvakare mukana wekuti vakachengeta kuomarara kubva kumubereki wavo Husky. Neichi chikonzero, kudzidziswa kunogona kuve kwakaoma.
Iyo Pitsky kuwedzera kwakakwana kune varidzi vane ruzivo, vanonzwisisa kudiwa kwekutanga uye kuenderera kwekushamwaridzana uye kudzidziswa.
Iyo Pitbull x Husky Musanganiswa inopindura zvakanyanya kusimbisa kwakanaka uye mubairo-wakavakirwa kudzidziswa . Yadhi yakachengetedzwa inodzivirira zvakare kuyedza kwekutiza!
Sezvo nezvose zvakapatsanurwa, haungambove uine zana muzana chokwadi pane hunhu hwaunowana:
Anogona kutarisisa Pitbull kupfuura Husky
kana kupfuura Husky kupfuura Pitbull
Anogona kuhukura kunge Pitbull
kana kuchema saHusky
Imbwa iyi ichabudirira mudzimba dzinoshingairira, ine varidzi vanofarira kufamba musango, kufamba kana kungova kunze. Dzimba dzemhuri dzakabatikana zvakare sarudzo yakanaka.
Ehe, iwe unoverenga izvo nenzira kwayo, kune mamwe maPug x Husky Masanganiswa!
Nekuda kwemusiyano wekukura mumarudzi aya, Husky anofanirwa kugara ari Amai uye Pug, ivo Baba. Izvi zvinokonzerwa izvo zvinozivikanwa zvehutano njodzi / matambudziko paunenge uchiberekana akasiyana mazamu akasiyana.
Chinangwa nerudzi urwu kwaive kuyambuka kuvimbika kwepug nehungwaru hwehusky.
Nekuda kwemusiyano wehukuru mumhando dzevabereki, iyo Husky Pug musanganiswa chaizvo inogona kutaridzika muhukuru uye huremu zvakare. Vanogona kunge vari chero pakati pe14-60 mapaundi pakurema uye vanogona kutangira kubva pa10-23 ”pakukwirira. Mukuvimbika kwese, iwe hauzive neyekutanga-chizvarwa musanganiswa.
Iyo bhonasi ine Husky Pug musanganiswa ndeyekuti vese vabereki vakavimbika zvakanyanya uye vakazvipira nemoyo wese kune varidzi vayo.
Nekudaro, nekuda kweizvi, musanganiswa anogona kutambura nekuparadzaniswa kunetseka zvichikonzera kuhukura kwakanyanya, kuparadza uye kuita tsvina mudzimba.
Vese Husky naPug vanogona kuve vakasindimara izvo zvinogona kuita kuti kurovedzwa kuve kunetsa. Nechikonzero ichi, musanganiswa weHusky-Pug unokodzera varidzi vane ruzivo vane nguva nekushivirira kwekudzidzira uye kudyidzana.
Musanganiswa weHusky-Pug unoda kutarisisa kwakawanda usati watora nekuda kweanogona kuita hunhu uye nenyaya dzehutano dzaungagare nhaka kubva kune chero mubereki. Nekuda kweizvozvo, imba ine ruzivo inonzwisisa marudzi ese evabereki yakakosha kune iyi yakavimbika, ine hushamwari uye yakasindimara pooch.
Nehurombo, izvo zvinowanzoitika nemuchinjikwa waHusky Pug, inhaka here iyo simba rakakura kubva kunaHusky uye kumeso kwakatarisana nePug.
Izvo zvakasimbiswa kuti Pugs vanotambura naBracychephalic Airway Syndrome saka vanokanganisa kufema kunodzivirira nekuda kwechimiro chemusoro wavo.
Izvi zvinotungamira mukufema kushushikana uye zvinogona kazhinji kuve zvakanyanya.
Kana uchichengeta imbwa dzinopenga, zvinowanzo kurairwa kuti zvipe kusimudzira kwepfungwa kumba uye enda kunofamba kwenguva pfupi mukutonhora kwemamiriro ekunze.
Nekudaro, iwe paunobatanidza husky inoda yekujairira kurovedza ne brachy pug kumeso; iwe unopedzisira uine imbwa inoda yakawanda yekurovedza muviri iyo iwe yausingakwanise kupa nekutya kwekufema kutambudzika.
Iko kunogara kune mukana zvakadaro, kuti iwe unogona kunge uine Husky-Pug musanganiswa uyo anogara nhaka yakawanda Husky mhando chiso; unobva wamhanya nenjodzi shoma kana uchirovedza muviri.
Hushamwari Musanganiswa uye anotamba Husky Sanganisa musanganiswa, iye Mufudzi wechiGerman x Husky anoshamisa semhumhi-semudziviriri.
Yakakura muhukuru, ndizvo zvakaitawo moyo yavo; vakavimbika uye vane rudo. Yakakwira musimba, ivo vanokodzera kumhuri dzinoshingairira dzinoda kuve dzekunze.
Ivo vakakwana shamwari kune vana vanonzwisisa izvo zvinodikanwa zvemarudzi makuru. Vachamhanya vachitenderera chivanze, chill pasofa uye kudzivirira nehupenyu hwavo.
Mufudzi wechiGerman ndiye inozivikanwa nekuvimbika kwayo , njere uye kudzidziswa. Zvinotarisirwa kuti rudzi urwu rwakagara nhaka hunhu hwakanaka hweMufudzi, asi, pane mukana wekuti vane kuomesa musoro kubva kumubereki wavo Husky.
Iwe unogona zvakare kuwana ivo vakagara nhaka husky kuchema. Mirira kuti ice cream rori ipfuure kana imwe tune kuti itambe paTV; ndeimwe yehunhu hwavo hunodakadza.
Kudzidziswa kwekutanga uye kushamwaridzana kwakakosha nemusanganiswa uyu.
Yadhi yakachengetedzwa zvakare inofanirwa; kwete chete kupisa simba ravo asi kudzivirira kupukunyuka. Huskies vanowanzochera kana vakafinhwa.
Kurovedza muviri uye kukurudzira ndiko kiyi kune aya mapere akasimba; unogona kuedza kumhanya nembwa yako.
Kungwara kwavo kunovakweretesa zvakakwana kumitambo yehuropi; swot up pane akanakisa uye iwe uchave uine imbwa inofara zvikuru.
Sezvo uyu muchinjikwa mhedzisiro yemarudzi makuru maviri; ivo vakatemerwa kune mamwe mamiriro ehutano anosanganisira hudyu dysplasia. Uku kunetsekana kukuru mu Vafudzi veGerman zvichikonzera kuremara, kuomarara uye kurwadziwa.
Iyo tariro ine muchinjikwa wekubereka ndeyekuburitsa mamwe mamiriro ehutano asi izvi zvinoenderana nemubereki maberekero uye isu tinoziva kuti hutano uye nharaunda zvinogona zvakare kubatsira mukuvandudza kwehudyu dysplasia.
Mukupfupisa rudzi rwakavhenganiswa nemhando mbiri dzevabereki vanga varipo kwemazana emakore uye vane mukurumbira wakakura, isu tine chokwadi chekuti akashinga uye anoshamisa weGerman Mufudzi Husky Musanganiswa achakurumidza kudiwa.
Kazhinji uye zvingangoita zvinodhura, iyo yeGolden Retriever Husky Mix ndeyechinyakare muchinjikwa wekubereka kunakidza imbwa dzedu mapaki.
Nevabereki vese vari vaviri vanoshamwaridzana, hazvishamise kuti iye Goberian anoda munhu wese nezvose. Chinangwa chekupedzisira cheGoberian kwaive kuve imbwa yakangwara, ine hushamwari uye inofarira mhuri.
Pakati nepakati pakakura, muGoberian anomira kusvika makumi maviri nemana pakureba uye anorema kusvika pamapaundi makumi masere (vanhukadzi kazhinji idiki muhukuru).
Ivo vane chivimbo, vari kuenda uye vanotamba. Kuwedzera kupenya kune chero mhuri inoshanda.
Ipo mamwe maHusky Mixes anogona kunge akaomesa musoro; izvi hazvisi zvinoonekwa muGoberian. Izvo zvavakachengeta kubva kumubereki wavo waHusky ndiko kusekerera kwavo, iwe zvirokwazvo hauzombove uine nguva inononoka; ndichiri kutarisira kuedza kutiza.
Kunge imbwa dzese, vanopindura zvakanyanya mubairo-wakavakirwa kudzidziswa .
Chatinonyanya kuda nezveGoberian ndeye yavo yakapfava uye floppy retriever senge nzeve; vane ichi puppy chitarisiko chisingambonyangarika.
Mbwanana yavo senge simba zvakare inoita seisina kunyangarika futi, iyo Goberian ibara rinoshingaira rinoda kugara uchirovedza muviri. Vanoda mafambiro avo ezuva nezuva uye nguva yavanopedzera vachitamba mupaki imbwa.
Sezvakaita mamwe maHusky, maGoberian haashiviriri kusiiwa vega kwenguva refu; izvi zvinogona kukonzera maitiro anoparadza nekuparadzanisa kushushikana.
Imbwa inofamba kana imbwa yekuchengetedza zuva inogona kubatsira mune aya mamiriro.
Simba ravo uye kuseka kwavo kunovaita hunhu hwakanaka kune chero mhuri. Vachatamba nemufaro bhora muyadhi pamwe nevechidiki, chill pasofa neChishanu manheru nevakuru uye vanofamba nemusango nemhuri yese neSvondo mangwanani.
Anochinjika uye anofambidzana, mutambi Goberian ishamwari huru uye ndiye watinofarira Husky musanganiswa.
Sezvatinogona kuona, pane zvakawanda zvekutarisa kana uchitsvaga mhando yeHusky Mix.
Iko kusanganisa kunogona kutora nhaka yakanaka kana yakaipa hunhu kubva kune chero mubereki. Sezvakaita nerudzi rupi zvarwo, kutsvagisa mukurumbira ane mukurumbira kwakakosha.
Kununura kunogona kunge kuri kufunga sezvo ongororo yavo ichizokuudza zvakawanda zvaunoda kuziva nezvazvo!
Kana iwe ukagadzwa paHusky Mix uye uchitsvaga akangwara mudziviriri, wechiGerman Mufudzi Husky anogona kuve iwe
Kana iwe uchida chimwe chinhu nechutzpah yakati wandei kupfuura yakajairwa Goridhe Retriever; weGoberian anogona kunge ari anokwikwidza
Imba diki asi ichiri kuda humwe hunhu, iye Corgi Husky anogona kunge ari iye
Iyo Husky Pug haina kukwana zvishoma kune vakawanda uye inoda kutariswa kwakawanda
Kana iwe ukasarudza kuwana imwe yeaya akasanganiswa musanganiswa, ita tarisa kune yedu Husky Mazita chinyorwa uye uve nechokwadi chekutizivisa iwe kana iwe uine imwe yemisanganiswa iyi mune zvakataurwa pazasi.
Kushungurudzika uye Kurasikirwa Kwechipfuwo: Iyo Inonzwisisika Gwara
14 Yakajeka Chokwadi Chawaisaziva Nezve Mini Miniendendle
imbwa yerudzii yandinayo
half german shepherd half husky puppies
musiyano pakati pe labrador uye retriever
border collie lab musanganiswa wakura
lab uye collie mix imbwa